juin 2016 – filazantsaramada
« Fa hianareo kosa dia taranaka voafidy, ‘fanjakàm-pisorona, firenena masina’ (Eks. 19. 6), olona nalain’Andriamanitra ho an’ny tenany, mba hilazanareo ny hatsaran’Ilay niantso anareo hiala tamin’ny maizina ho amin’ny fahazavany mahagaga; » 1Petera 2:9
Publié parfilazantsaramada juin 24, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur
TAHAKA NY RAINAREO MPAMINDRA FO.
« Aoka ho mpamindra fo hianareo mba ho tahaka ny Rainareo, Mpamindra fo. » Lioka 6:36 Tamin’y nifidianan’i Jesosy ny apostoly sy ny asa fanasitranana maro nataony ary ny toriteny nataony no nitenenany izao teny izao. Raha ny marina, ny zanaka dia tokony hanahaka ny ray izay niteraka azy, na ny endrika na ny bika ary na […]
Publié parfilazantsaramada juin 24, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur TAHAKA NY RAINAREO MPAMINDRA FO.
Seminera Fampiofanana: “Fampitaovana ny olona masina” Manomboka ny Taom-piasana 2016/2017 ny Feon’ny Filazantsara (FF) amin’izao fotoana izao (Jona 2016 – May 2017). Araka ny Programan’asa ho an’ity Taom-piasàna ity moa dia Seminera Fampiofanana: “Fampitaovana ny olona masina”miisa enina (6) no ho tanterahina amin’ireo Fiangonana maniry sy liana amin’izany. Ho fananganana ny fiaraha-miasa dia misy hatrany […]
Publié parfilazantsaramada juin 21, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/ Feon’ny Filazantsara
FIFALIANA EO ANATREHAN’NY ANJELIN’ANDRIAMANITRA.
« Lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatrehan’ny anjelin’Andriamanitra ny amin’ny mpanota iray izay mibebaka. » Lioka 15:10 Raha nanatona hihaino an’i Jesosy ny mpamory hetra sy ny mpanota dia nimonomonona ny Fariseo sy ny mpanora-dalàna: Ilehity mandray ny mpanota ka miara-mihinana aminy. Andriamanitra tia ny hamonjy antsika, ka isika very noho ny fahotantsika iny […]
Publié parfilazantsaramada juin 17, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FIFALIANA EO ANATREHAN’NY ANJELIN’ANDRIAMANITRA.
Taom-piasana vaovao 2016/2017
Izaho no Andriamanitrao Araka ny efa voalaza tany aloha dia manomboka ny volana Jona ka hatramin’ny volana May ny taom-piasan’ny Feon’ny Filazantsara (FF). Noho izany dia eo am-panombohana ny taom-piasana vaovao izao. Nisy noho izany ny fitondrana am-bavaka ny taona vaovao, ireo programan’asa marobe vokarin’ny FF, ireo mpiara-miasa an-tsitrapo manerana ny Nosy, ireo Fiangonana mpiara-miasa […]
Publié parfilazantsaramada juin 16, 2016 juin 25, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Taom-piasana vaovao 2016/2017
« Ary hoy ny tompo tamin’ilay mpanompony: Mandehana ho eny amin’ny làlambe sy ny sisim-boly, ka tereo ny olona hiditra, mba ho feno ny tranoko. » Lioka 14:23 Nisy olona anankiray nanao fanasàna lehibe ka nanasa olona maro. Ny fanasana dia tokony ho vokatry ny fitiavana satria na ny fandaniana, izay na dia kely aza dia misy […]
Publié parfilazantsaramada juin 10, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FIANTSOANA
Asa Fitoriana ny Filazantsara eny amin’ny Fonja
Fanamafisana ny fiaraha-miasan’ireo mpiara-miasa an-tsitrapo « Volontaires FF » Niisa valo ireo mpiara-miasa an-tsitrapo teto amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) niasa teny anivon’ny Fonjaben’Antanimora saingy tsy afaka nanohy ny asa intsony ny telo. Misy hatrany anefa ireo maniry ny hizara ny fitiavan’i Jesosy Kristy amin’ireo voafonja, izay tena ao anatin’ny aizina tokoa. Nanomboka ny volana Aprily 2016 teo […]
Publié parfilazantsaramada juin 9, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Asa Fitoriana ny Filazantsara eny amin’ny Fonja
NY FANARAHANA NY TOMPO
« Fa hoy i Abrahama taminy: Raha tsy mihaino an’i Mosesy sy ny mpaminany izy, dia tsy hety hino izy, na dia misy mitsangana amin’ny maty aza. » Lioka 16:31 Nananatra ny Fariseo izay fatra-mpitia vola Jesosy ary tamin’izany no nilazany ny tantaran’ilay mpanankarena nanaram-po fatratra isan’andro tamin’ny fahafinaretana, ary nisy olo-mahantra ferena napetraka teo anilan’ny vavahadiny. […]
Publié parfilazantsaramada juin 3, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FANARAHANA NY TOMPO
Club FF, Lycée nanisana
Ny antony ahavelomako Araka ny efa voalaza tany aloha dia mivory isaky ny Talata atoandro (12 ora 30mn – 1 ora 30mn) ireo mpikambana ao anatin’ny Cub FF eny amin’ny Lycée Nanisana. Fotoana izay nataon’izy ireo handinihana ny Tenin’Andriamanitra, na hamelabelarana lohahevitra iray izay arahina fiifampizarana sy fifampaherezana eo amin’ny fianarana izay atao. Isaky ny […]
Publié parfilazantsaramada juin 3, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Club FF, Lycée nanisana